6 Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato Samsung Kies 3
Samsung Kies 3 waa software ah oo aasaasi ah oo aqoon muhiim u yahay user kasta oo Samsung ay leeyihiin. Software Tani fudud ka dhigaysa habka file kala iibsiga fudud sida neecaw iyo saamaxaya kuwa isticmaala si loo soo dajiyo casriyaynta firmware in si aanay u qaadan in ka badan hawada ku. In this article, waxaan qaadi doonaa eegno lixda waxyaalaha ugu muhiim ah in aad, sida user ah, waa in la ogaado oo ku saabsan Samsung Kies 3.
Waa maxay Samsung Kies 3?
Samsung Kies 3 waa rasmiga Samsung software ugu danbeysay ee suuqa kala iibsiga ee xogta ka qalab Samsung ay u computer ama laptop iyo qeybsanaan. Iyagoo keliya ma aha in, Samsung Kies 3 waxaa loo isticmaali karaa in ay gurmad iyo soo celinta qalab. Ma aha oo keliya file a wareejinta software; Samsung Kies waa aalad awood iyo waxtar leh in loo isticmaali karo in ay sii firmware qalab Samsung ah updated. Waxaa lagala soo bixi karaa halkan .
Samsung Kies 3 taageertaa dhammaan qalabka Samsung Galaxy socda Android version 4.3 iyo wax ka sareeya.
Software loo baahan yahay
Wixii Windows XP, Samsung Kies 3 baahan yahay: warbaahinta Windows Player 11 ama ka sarreeya, Windows 7, 8 OS N, Kn: Windows Media Feature Pack
Download iyo rakibi Kies 3 on your computer / laptop
Samsung Kies 3 lagu rakibi karo iyadoo la isticmaalayo link kor ku siiyo. Waxaa lagu heli karaa laba nooc; mid la jaan qaada Windows oo kale waa in la jaan qaada Mac OS. Download mid ka mid ah in uu ku haboon yahay isticmaalka.
Mudanayaasha waa file a 40.8 MB oo aan qaadan muddo dheer si ay u soo bixi. Marka download waa dhameystiran, gashato on your computer.
Sida loo isticmaalo Samsung Kies 3
Marka la rakibo dhamaato, abuurtaan Samsung Kies 3 on your computer oo laptop ah iyo inay raacaan talaabooyinkan:
Marka bilaabay 3 Samsung Kies ee software, screen ugu horeysa ee aad la kulmi doonaa eegi doonaa sida soo socota:
Isticmaalka cable USB ah, ku soo lifaaq qalab Samsung in aad laptop oo sug Kies 3 si ay u aqoonsadaan. Ma aha in lagu weydiin doonaa in aad in lagu furo qalabka haddii la qufulay, waayo, Samsung Kies 3 si ay u helaan. Marka aqoonsiga qalabka, Kies3 muujin doonaa dhammaan macluumaadka ku saabsan qalabka uu furmo suuqa la mid ah mid ka mid ah hoos ayaa lagu muujiyey. Waxaad arki kartaa in macluumaadka xasuusta iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan firmware ayaa ku qoran baxay fududaato isticmaala.
Isticmaalka menu ee dhinaca bidix ee shaashadda waxaad eegi kartaa inta u dhaxaysa music, sawiro iyo videos on qalab aad. Waxaad doortay karaa track ah ama video ah oo lagu ciyaaro ama sawir inay ku muujiyaan. Waxa kale oo aad ku dari kartaa files ka your computer in mid ka mid ah kuwan.
Si aad u isticmaasho Kies 3 si ay buuxda, waxaad tagi kartaa ah "Tools" doorasho iyo doorasho mid ka mid ah fursadaha siiyo sida aad looga baahan yahay. Doorashada "hagaajinta firmware iyo initialization" dhigaysa Samsung Kies in la raadiyo hagaajinta firmware ugu dambeeyey ee la heli karo aad qalab Samsung. Haddii ay u aragto mid ka mid ah, wargelin ah u muuqataa shaashadda aad ka warrami helitaanka casriyayn ah. Haddii kale, wargelin kale idiin ka warrami in firmware ugu dambeeyay ayaa hore lagu rakibay on qalab Samsung.
Su'aalaha ku saabsan Samsung Kies 3
Aan la awoodin in la rakibo Kies 3 karaa "dhibic habka soo galo? _xmem @ @ Tri STD@@yaxxz lama ku yaalla msvcp90.dll link firfircoon maktabadda"
Baadi Tan caadi ahaan keena maqnaanshaha Microsoft Visual C ++ 2008 SP1 Redistributable Xirmada (x86). Kies 3 baahan tahay software si aad u fiican u shaqeyo, sidaas darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la rakibay si aad laptop ama desktop ka hor ku rakibidda Kies 3. Waxaa lagala soo bixi karaa halkan .
Samsung Kies ku guuldareysto inuu ku soo bilowdo
Qaladkii fudud u muuqda ma leedahay sida xal fudud. Dib A daaqadaha loo baahan yahay iyo Kies 3 ka dibna ku soo bilowday ka shaqeeya daaqadaha cusub ee dib sida caadiga ah.
Best Kies kale: Wondershare MobileGo
Samsung Kies 3, shaki la'aan waa shay muhiim ah in uu caawiyo dadka isticmaala ee hawlaha aasaasiga ah ee suuqa kala iibsiga file iyo sidoo kale kuwa la xiriira firmware dhib iyo cusboonaynta. Laakiin, dadka isticmaala qaar ka mid ah doonayaan dheeraad ah oo baqdin baahidooda. Dadka isticmaala sida, Kies 3 ma noqon karaa mid aad waxtar u leh. Badiilka ah in Kies 3, dhan functionalities hore marka lagu daro qaar ka mid ah muuqaalada dheeraad ah aad u awood badan yahay MobileGo Wondershare . Waxaa sii balaadhiyey xadidan Kies 3 shaqeynta iyo u dhaqmo sida qalab oo dhan ka mid ah.
Halkan waxa ku jira muuqaalada MobileGo ah:
Waxa aad maamuli kartaa warbaahinta ee aad taleefan kula hawlaha sida download, noqonin,-dhoofinta leh talaabooyin fudud.
Waxa aad maamuli kartaa daruuriga mobile sida xiriirada nuqul, qalabka biiro, barnaamijyadooda maamul, iyo gurmad-celin.
Intaa waxaa dheer, waxa uu ku hormartay hawlaha sida soo kabsado xog badan, helaan ogolaanshaha sare u hagaajin qalab shaqeynayaan.
Wondershare MobileGo ma aha oo kaliya qaadataa daryeelka habka wareejinta, waxa loo isticmaali karaa in ay dib u qalabka sida kaliya ee Kies. Waxaa intaa dheer, waxa loo isticmaali karaa in ay buugii qalab aad on your laptop ama desktop. Intaas waxaa sii dheer, waxa ay leedahay nadiifiye ah hidi in qaadataa daryeelka ee Chine xasuusta cunidda aad smartphone. Waxa kale oo cajiib ah waa awooda in ay taageeraan ku dhowaad dhammaan casriga ah iyo ma ahan oo keliya kuwa ay Samsung. Sidoo kale, Wondershare MobileGo waa la jaan qaada labada Windows iyo Mac ka hawlgala nidaamyada.
> Resource > Android > 6 Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato Samsung Kies 3